Liverpool Oo Ogolaatay Heshiis 2 Milyan Oo Ginni Ah Oo Kusoo Qaadanayaan Ben Davies.
HomeHoryaalka IngiriiskaLiverpool oo ogolaatay heshiis 2 milyan oo ginni ah oo kusoo qaadanayaan Ben Davies.
February 1, 2021 Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Liverpool ayaa ogolaatay lacag dhan 2 milyan oo ginni oo ay kula soo saxiixato daafaca Preston Ben Davies ka hor inta aan la gaarin maalinta Isniinta.
Reds ayaa wadahadalo la furtay kooxda heysata horyaalnimada, Davies ayaa haatan mari doona caafimaad subaxnimadii Isniinta.
Kooxda heysata horyaalka Premier League ayaa sidoo kale lasiiyay fursad ay kula soo wareegaan kooxda Marseille xidiga u ciyaara ee Duje Caleta-Car, in kasta oo tallaabadaas la fahamsan yahay inaysan macquul aheyn iyadoo kooxda Ligue 1 ay ku qasbeyso Qaab amaah ah.
Jurgen Klopp ayaa jimcihii xaqiijiyay in kooxda heysata horyaalka Premier League ay isku dayi doonaan inay ugu yaraan hal waji cusub keenaan, iyadoo afarta koox ee waa weyn ay haatan dhaawac ku qabaan.
Oo waxay u muuqataa Davies inuu yahay ninka ay degeen. Ilo wareedyo ayaa u xaqiijiyey Goal axadii in Liverpool ay u dhaqaaqday heshiiskaas iyo sidoo kale Sepp van den Berg, daafaca da’da yar ee reer Holland, uu amaah ugu dhaqaaqi doono Deepdale isagoo qeyb ka ah heshiiska.
Markii wax laga weydiiyay xiisaha ay u qabaan daafaca ka dib guushii ay Liverpool 3-1 kaga gaartay West Ham axadii, Klopp ayaa u sheegay Sky Sports: “Ben Davies, Tottenham… Ma haysto wax aan ka sheego. Khadkan ma ahan dhibaato, waa kaliya haddii wax kale dhacaan.
Davies, oo 25 jir ah, ayaa qandaraaskiisa dhacaya dhamaadka xilli ciyaareedka, taasoo la micno ah inuu diyaar ku yahay inuu kubiiro kooxda Reds Wuxuu ku dhashay Barrow-in-Furness, oo ku raaxeysanaya daafaca bidix iyo sidoo kale daafaca dhexe, Davies wuxuu in ka badan 140 kulan ka soo muuqday Preston, wuxuuna ku riyaaqay amaah badan oo ay ka mid yihiin York, Tranmere, Southport, Newport County iyo Fleetwood.
Liverpool ayaa ku qasban in saxiix ay sameyso ka dib markii arrimaha dhaawaca sii kordhayaan bishaan Joel Matip ayaa dhibaato ka soo gaartay kooxda Tottenham khamiista waxaana ay u badan tahay inuu maqnaan doono dhowr isbuuc, halka Fabinho uu qarka u saaran yahay inuu seego kulanka soo socda ee Reds la ciyaareyso Brighton, isagoo la cabanaya dhibaato muruqa ah.